Okokuqala iLufthansa Boeing 787-9 Dreamliner eza kuthiwa yiBerlin
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Okokuqala iLufthansa Boeing 787-9 Dreamliner eza kuthiwa yiBerlin
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • abantu • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Okokuqala iLufthansa Boeing 787-9 Dreamliner eza kuthiwa yiBerlin.
ILufthansa kunye nekomkhulu laseJamani banobudlelwane obude kunye nobukhethekileyo. Inkampani yangaphambi kwemfazwe yasekwa eBerlin ngo-1926 yaza yavuka kwakhona ukuba ibe yenye yeenqwelomoya eziphambili kwihlabathi. Emva kwencopho yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye kangangeminyaka engama-45, yayiziinqwelo-moya ezazingumkhosi 'wamahlakani' kuphela ezavunyelwa ukuba zehle kwisixeko esahluliweyo.
Umsitho wamagama osemthethweni kunye nenqwelomoya yokuqala yenqwelomoya yokuqala yaseLufthansa iBoeing 787-9 kunyaka olandelayo ocwangciselwe unyaka olandelayo.
ILufthansa ibhengeze ukuba izakufumana iinqwelomoya ezintlanu zeBoeing 787 Dreamliners ngonyaka ka-2022.
Ukusetyenziswa kwepetroli kunye nokukhutshwa kwe-CO2 yeenqwelomoya ezitsala ixesha elide zijikeleze iipesenti ezingama-30 ezantsi kunangaphambili.
Ikomkhulu laseJamani liya kufumana inxusa elitsha "lokubhabha": Lufthansa ibiza iBoeing 787-9 yayo yokuqala ngokuba yi "Berlin." Umsitho wamagama umiselwe ukuba uqhubeke emva kokuhanjiswa kwenqwelomoya kunyaka olandelayo.
"Berlin”Yeyokuqala kwezintlanu iBoeing 787-9 Dreamliners ethi iLufthansa iza kuyongeza kwizithuthi zayo ngo-2022. Inqwelomoya yeenqwelo-moya ezisebenzisa ixesha elide zisebenzisa umyinge kuphela iilitha ezi-2.5 zeparafini kumhambi ngamnye neekhilomitha ezili-100 zibhabha. Oko kumalunga neepesenti ezingama-30 ngaphantsi kweenqwelo-moya zangaphambili. Ukukhutshwa kwe-CO2 kuphuculwe kakhulu.
Ukususela kwi1960, Lufthansa Inesiko lokuthiya iinqwelomoya zayo ngezixeko zaseJamani. UWilly Brandt, u-Chancellor wase-Jamani wase-Jamani ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 kunye nama-70s, wahlonipha uLufthansa ngexesha lakhe lokuba ngu-Sodolophu wase-West Berlin (1957-1966) ngokubiza igama lokuqala le-airline iBoeing 707 “Berlin".
Kutshanje, iAirbus A380 enesazisi sokubhalisa iD-AIMI ibinegama elidumileyo kwikomkhulu laseJamani. ILufthansa Boeing 787-9- "iBerlin" -izakubhaliswa njenge-D-ABPA. Indawo yokuqala ehleliweyo yamazwe aphesheya kweLufthansa's 787-9 iya kuba yiToronto, iziko lezemali laseCanada kunye nehabhu.
Lufthansa kwaye ikomkhulu laseJamani linobudlelwane obude kunye nobukhethekileyo. Inkampani yangaphambi kwemfazwe yasekwa ngo Berlin ngo-1926 kwaye wavuka kwakhona waba yenye yeenqwelomoya ezihamba phambili emhlabeni. Emva kwencopho yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye kangangeminyaka engama-45, yayiziinqwelo-moya ezazingumkhosi 'wamahlakani' kuphela ezavunyelwa ukuba zehle kwisixeko esahlulekileyo.
Ukusukela oko babumbana kwakhona, iLufthansa ibindiza eBerlin ngaphezulu kweminyaka engama-30, kungekho nalinye iqela lenqwelomoya elibhabhisa iiBerliners ezininzi kwihlabathi liphela kumashumi eminyaka adlulileyo njengeLufthansa kunye nabathwali bayo. Okwangoku, iinqwelomoya zeLufthansa Group zidibanisa ikomkhulu laseJamani kwiindawo ezingama-260 kwihlabathi liphela, nokuba zibhabha ngokuthe ngqo okanye ngokudibana kwenye yeqela lamaqela.